Live sale တွေမှာ ရတဲ့ငွေကို ဂျမ်းတောမလေးကို ဘယ်လိုခွဲဝေပေးလဲဆိုတာကို ပြောပြလာတဲ့ စည်သူပလပ်ကျွတ်……. – Cele Oscar
Live sale တွေမှာ ရတဲ့ငွေကို ဂျမ်းတောမလေးကို ဘယ်လိုခွဲဝေပေးလဲဆိုတာကို ပြောပြလာတဲ့ စည်သူပလပ်ကျွတ်…….
June 17, 2022 By L YC Celebrity
ပရိသတျကွီးရေ သရုပျဆောငျ စညျသူပလပျကြှတျ ကတော့ အနုပညာကိုအောကျခွကေနစေခဲ့ပွီး ကိုပေါ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးရိုတျကူး ရတဲ့အထိ အားပေးမှုရရှိခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။စညျသူပလပျကြှတျ ကတော့ papilo ဖိနပျကို ကိုယျစားလှယျ ယူပွီး ရောငျးခပြေးနသေလို tiktok ဆယျလီတှေ နဲ့ အတူကွောငွာတှလေညျး ရိုတျနတော ဖွဈပါတယျ။
လကျရှိမှာတော့ စညျသူပလပျကြှတျ က tiktok မှာ နာမညျကွီးတဲ့ သရကျကငျ ရောငျးတဲ့ ဂမျြးတောလေးကို ကူညီရမှာ ပိုမိုနာမညျကွီးလာပွီး ဖဘေု့တျဈမှာ follower တှလေညျး ရှဈသောငျးကြျောလောကျ ကို ခနလေးအတှငျး တိုးလာခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။
သရုပျဆောငျစညျသူပလပျကြှတျကတော့ ဂမျြးတောလေး နဲ့ အတူ live sale တှလေညျး လှငျ့နရေပွီး ထိုငျးနိုငျငံ ဘနျကောကျမှာကို ကွောငွာတှရေိုတျကူးနရေပွီလညျးဖွဈပါတယျ။လကျရှိမှာ ဂမျြးလေးကိုအသုံးခပြွီး follower တိုးအောငျလုပျနတေယျလို့ ဝဖေနျမှုတှကေို ရှငျးပွလာပွီး live sale ကရတဲ့ငှတှေကေို ဘယျလိုခှဲပေးလဲဆိုတာ ကိုစညျသူပလပျကြှတျ ကရှငျးပွလာတာလညျးဖွဈပါတယျ။
Video Credit ; First Post Media
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် စည်သူပလပ်ကျွတ် ကတော့ အနုပညာကိုအောက်ခြေကနေစခဲ့ပြီး ကိုပေါ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရိုတ်ကူး ရတဲ့အထိ အားပေးမှုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စည်သူပလပ်ကျွတ် ကတော့ papilo ဖိနပ်ကို ကိုယ်စားလှယ် ယူပြီး ရောင်းချပေးနေသလို tiktok ဆယ်လီတွေ နဲ့ အတူကြောငြာတွေလည်း ရိုတ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ စည်သူပလပ်ကျွတ် က tiktok မှာ နာမည်ကြီးတဲ့ သရက်ကင် ရောင်းတဲ့ ဂျမ်းတောလေးကို ကူညီရမှာ ပိုမိုနာမည်ကြီးလာပြီး ဖေ့ဘုတ်စ်မှာ follower တွေလည်း ရှစ်သောင်းကျော်လောက် ကို ခနလေးအတွင်း တိုးလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သရုပ်ဆောင်စည်သူပလပ်ကျွတ်ကတော့ ဂျမ်းတောလေး နဲ့ အတူ live sale တွေလည်း လွှင့်နေရပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မှာကို ကြောငြာတွေရိုတ်ကူးနေရပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာ ဂျမ်းလေးကိုအသုံးချပြီး follower တိုးအောင်လုပ်နေတယ်လို့ ဝေဖန်မှုတွေကို ရှင်းပြလာပြီး live sale ကရတဲ့ငွေတွေကို ဘယ်လိုခွဲပေးလဲဆိုတာ ကိုစည်သူပလပ်ကျွတ် ကရှင်းပြလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာ ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ တရားဝင်ရွှေလက်တွဲခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် နိုဘယ်ကျော်ကျော် ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲ…….
ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ ကြီးမားတဲ့‌ မေတ္တာ နဲ့အချစ် တွေကို မြင်စေချင်လို့ အဖေများနေ့မှာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့video လေးကိုချပြလာတဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း….